I-RC enconyiwe: IHero 2 | Izincwadi Zamanje
NgeHero 2, UDavid rubin iqeda omunye wemisebenzi emihle kakhulu engatholakala namuhla emashalofini ezitolo ezidayisa izincwadi nasezitolo ezikhethekile. Angizange ngibe nephutha ngokungacacisi futhi ngithi amahlaya, amahlaya, inoveli yezithombe noma yini ofuna ukuyibiza ngayo. Ngithe UMSEBENZI ngeqiniso lokusebenzisa igama ebengihlose ukulibeka. Futhi uma ngingeze i-MAESTRA kulelo gama, angicabangi ukuthi abafundi (labo asebeke banambitha ngalinye lamakhasi angama-568 kuyo yomibili imiqulu) bangangibiza ngehaba.
Buyela emuva Juni 2011 washicilela okwakubonakala kimi kungumqulu wokuqala, ebukeza izincwadi zangaphambilini zikaRubín (Isekisi Lokudumazeka, IMalay Bear Teahouse o Incwajana Yesiphepho) futhi kubalwa ngokumangala kwami, iThe Hero yayinencazelo esondele (nenenhlonipho) yamahlaya ama-superhero akudala, kunalokho okushicilelwa nguMarvel noma DC kulezi zinsuku. Umbhali waseGalician ungena ezindabeni ezaholela kubabhali abanjengo UJack Kirby ukuba izinganekwane ezisuselwa ekwakheni izinganekwane, ikakhulukazi ngochungechunge olunjengoThor, The Fantastic 4, The Eternals noma Umhlaba Wesine. Akumangalisi ukuthi iKing Kirby ingenye yamathonya acacile (kufanele ubone ikhasi lokuqala levolumu yokuqala, ngaleyo nkumbulo ebonisiwe kaRubín uqobo efunda uCaptain America waseKirby) ukuthi uRubín uyakwazisa ukubhala lo mlando, kanye sekuvele kushiwo kakhulu, lapha nakwezinye izibuyekezo, UPaul Pope, uFrank Miller, uDavid Mazucchelli o Max.
Qhafaza Qhubeka ufunda ukuqhubeka nokubuyekezwa.
Kodwa-ke, enye yezinsizi ezishiya ukufunda okuqhubekayo (kunconywa kakhulu ukuthi uphinde ufunde iHero 1 ngaphambi kokungena kowesibili) ukuthi umsebenzi omkhulu kunayo yonke okumele uHeracles ayinqobe yimpilo uqobo lwayo eholela kusukela ekuqaleni kuye kulolo daba oluphela ngalo lapho ebhekene nesitha sakhe esikhulu kunazo zonke, uHera, lowo oye waba naye phakathi kwamashiya selokhu azalwa. Ngicabanga ukuthi ekugcineni kosuku, omunye wemiyalezo uRubín ahlose ukuwuthumela yilokho, ukuthi ngisho noNkulunkulu onjengoHeracles kumele athwale amagalelo impilo emnika wona, nezinqumo namaphutha amholela endleleni mhlawumbe wanqunyelwa ngaphambili noma kunjalo, wenza isibalo sakhe saba sesimweni somuntu ukuze sizwisane naye kakhulu. Ekugcineni, kumayelana nokwenza ubuntu bomuntu wasenganekwaneni, ukumenza umzalwane onomona, indodana engaqondakali, ubaba ongakwazi ukuzivocavoca kanjalo, umyeni ongathembekile, isithandwa nje futhi ngaphezu kwakho konke umuntu olahlekile ohambweni lwayo olubalulekile . Futhi akukhona kuphela ukuthi imizwa enjalo yomuntu ikhawulelwe kumfanekiso kaHeracles, uma kungenjalo kubo bonke abanye abalingiswa, abanjengo-Euristeo, uHera noma uYolae, abahlupheka baze bafikelwe umona.
Kepha noma ngabe indaba ihlelwe kahle kanjani nokuthi isiteji sihle kanjani, umuzwa osalayo uma usuqedile ukufunda ikhasi lokugcina lale volumu yesibili ukuthi umuntu ophethe ukuyenza ushiye isikhumba kuso. Amandla abalulekile anikezwa yisigcawu ngasinye sesenzo, noma umuzwa okwehlisayo lapho uthando, isifiso noma inhlekelele inyakazisa ubukhona obubonakalayo obuhle be-protagonist, kukwenza kucace ukuthi lokhu akuyona ikhomikhi ezoba ngumfutho odlulayo bese ufika ekukhohlweni eminyakeni edlule, futhi noma ngabe bekuyikho, okubalulekile ukuthi kumdali wayo ngeke kube nje omunye amahlaya azokwengeza ohlwini lwemisebenzi yakhe kuze kube manje. Ngicabanga ukuthi uma kuze kube manje uRubín ebenezincwadi ezingaphezu kwezithokozisayo, le miqulu emibili eyakha indaba eyingqayizivele futhi ngasikhathi sinye, ingukuma okugcwele kulokho esizokubona kusukela lapha kuye ekhanda lakhe ukuthi azalwe ngu isandla sakhe. Empeleni, sengivele ngiwubonile umyalezo ku-Facebook oxwayisa ngalokho okuzayo futhi ngikulangazelele kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Kunconywe i-RC: IHero 2